Nhau - Ndeapi machira anoshandiswa kumidziyo?
Zvinoenderana nemachira akasiyana, fenicha yakasimudzwa inogona kukamurwa kuita dehwe, chakagadzirwa nedehwe, jira, nezvimwewo. Jira rematehwe akasimudzwa fenicha iganda remhuka, jira remidziyo yematehwe yakasimudzwa fenicha iganda rekugadzira, uye jira remucheka sofa , hemp, donje, chemakemikari fiber uye mamwe machira. Sekureva kwemapfupa akasiyana emidziyo yakapfava, inogona kuve yakakamurwa kuita marangwanda, masaga masimbi uye fenicha isina masaga. Firati yematanda fenicha yakapfava fenicha yakapfava ine huni zvinhu semasaga ayo. Iyo simbi skeleton yakapfava fenicha fenicha yakapfava yakagadzirwa nesimbi zvinhu kana simbi uye huni semafupa, uye hapana skeleton software fenicha, ndokuti, hapana marangwanda mukati, uye fenicha fenicha yakananga kupupuma furo nezvinhu, zvinosanganisira inflatable uye nemvura yakazara midziyo.
1. Kotoni pasofa: zvakatipoteredza zvine hushamwari uye zvakagadzikana
Iyo jira sofa iyo yakagadzirwa nekotoni yakachena yakapfava, inofema, yakasikwa uye inoshamwaridzika nharaunda. Icho chiri pedyo zvikuru neganda. Ndiyo mhando inonyanya kufarirwa mumusika. Dhizaini dhizaini inoshandiswa zvakanyanya mune yakachena donje sofa.
2. Flannelette sofa: yakapfava uye isina kusimba
Kufanana nehuswa hwemhuka diki, chinonyanya kushamisa pane iyo flannel pasofa ndiko kubata kwayo kwakanaka uye kupfava. Kubva pacorduroy munguva yakapfuura kusvika suede izvozvi, flannelette sofa iri kuchinja chimiro chayo mune gaudy uye yakashongedzwa. Inofananidzwa nemamwe machira, flannelette sofa inodhura.
3. Sofa yerineni: inodziya munguva yechando uye inotonhorera muzhizha
Kudziya munguva yechando uye kunotonhorera muzhizha, chikamu chinokwezva chesofa yerineni ndiko kwayo kwakanaka kupisa kupisa. Kunyangwe kana kuchipisa muzhizha, usazvidya moyo nezve kudikitira. Iko kunaka kwesofa yerineni iri padyo uye yakapfava, ine mwero mukuoma uye kupfava, ine mhando yakapfava uye yakasikwa hunhu.
4. Sofa rakasanganiswa: rakafanana nerakasikwa
Kotoni yakasanganiswa nemakemikari fiber zvinhu zvinogona kuratidza zvinoonekwa zvesilika, flannelette kana hemp, asi iyo pateni uye ruvara hazvisi zvechisikigo uye zvakachena, uye mutengo wacho wakachipa.